Tuesday, 28 September, 2021 | १२ आश्विन २0७८ , मङ्गलबार
नेपाली कांग्रेस भक्तपुरका युवा नेता राम थापा मगर मध्यपुर थिमी नगरपालिका वडा नं २ का अध्यक्ष हुन् । ३७ वर्षका यी युवा सधै जनताको काममा दत्तचित्त भएर लागेका देखिन्छन् । वडाभित्र जनताका काम चाँडोभन्दा चाँडो गरेर पार्टीलाई अझैवढी लोकप्रिय बनाउन उनको टिम सक्रिय छ । उनी भन्छन,‘वडा कार्यालय भित्र पसेपछि जनताले कामैभएन भन्ने गुनासो नआवस ।’ वडाको विकास निर्माण र नेपाली कांग्रेस नगर समिति भित्रको मत मतान्तरलाई लिएर थापा मगरसँग अमरवाणी डटकमले गरेको कुराकानीः
तपाईँले निर्वाचनको बेला जनतासँग गर्नुभएका वाचा पुरा गर्न कत्तिको कठिनाई महसुस भइरहेको छ ?
वडाको विकास निर्माणका निम्ति हामीले निर्वाचन अघि जुन रोडम्याप बनाएका थियौँ; जुनजुन एजेण्डा जनताका बीचमा लगेका थियौं, तिनलाई क्रमवद्ध रुपले कार्यान्वयन गर्दै आइरहेका छौं । पाँच वर्षे कार्यकालमा हामीले निर्वाचनका बेला अघि सारेका एजेण्डाहरू पुरा गर्ने लक्ष्यका साथ अघि वढेका छौं । यस कार्यमा मेरो टिमले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको छ । त्यसो त हामीले जनसमक्ष गरेका वाचाहरू मध्ये कतिपय काम एक वर्षकै अवधिमा पुरा भइसकेका छन् ।
एक वर्षको अवधिमा के के काम गर्नुभयो त ?
हाम्रो पहिलो मुख्य काम मनोहरा पुलदेखि खस्याङखुसुङ पुलसम्म बीस मिटरको बाटो बनाउने हो । यो राष्ट्रिय योजना पनि हो । अन्त कतै नभएपनि हाम्रो दुई नम्बर वडामा चाहिँ बीस मिटरको बाटो हुनेछ । त्यसको हामीले लगभग ७०% काम सम्पन्न गरिसकेका छौं । बाटो चौडा गर्ने काम भईसकेको छ । ढल बनाउने र पिच गर्ने काम क्रमशः हुँदै जानेछ । यही कार्य वडा नं ६ को बाख्रा बजार क्षेत्रमा भने केही समस्या देखिएको छ । यस बाहेक वडामा खानेपानीका लागि वन कार्यालयसँगै रू.५० लाखको लागतमा डिप बोरिङ गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । अब ओभर हेड ट्याङकी निर्माण र पाइप विस्ताको काम गर्न बाँकी छ । यो रू.१२ करोड ७७ लाखको योजना हो । यसमा वडाले पनि रू. १५ लाख वजेट विनियोज गरिसकेको छ । निकट भविष्यमै वडामा पानी वितरण गरिनेछ ।
युसएडको रू.३० करोड लगानीमा आदर्श माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माण कार्य भइरहेको छ । जनताका मुख्य समस्या खानेपानी र ढल व्यवस्थापन नै हुन् । यसलाई दृष्टिगत गरे ढलमा ह्युम पाइप बिछ्याउने र खानेपानीको पाइप बिस्तार गर्ने काम भइसकेका छन् । भित्री बाटोमा ढलान,ढुङ्गा छ्याप्ने र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि वडा कार्यालबाट काम भइरहेका छन् ।
नगरपालिकाको मेयर फरक पार्टीको हुनुहुन्छ, बजेटको बाँडफाँट लगायत निर्णायक कार्य गर्न कत्तिको अप्ठ्यारो भईरहेको छ ?
हो, फरक पार्टी भएपछि विचारधारा फरक हुने नै भयो । यो स्वभाविक पनि हो । तर, विकास निर्माणका कार्यमा हामी सबै एक मत छौं । विकास निर्माणका कार्यमा कुनै मतभेद छैन । त्यसो त मध्यपुर थिमी नगरपालिकामा हामी नेपाली कांग्रेसका सदस्यहरू नै दुई तिहाई छौँ । काम गर्न नगर प्रमुखबाट कुनै पनि वाधा अड्चन आएको छैन् । उहाँ पनि विकासप्रेमी नै हुनुहुन्छ । नगरको विकास निर्माणका लागि त्यस्तो खालको समस्या छैन ।
समस्या त तपाईँहरुको आप्mनै पार्टीभित्र देखाप¥यो नि ! कांग्रेस नगर समिति र तपाईँहरू बीचको खटपट के हो ?
यो हाम्रो पाटीभित्रका केही साथीहरुले बुभ्mन नचाहेको कुरा हो । यस विषयमा धेरै कुरा नगरिहालौँ । यो क्षणिक कुरा हो । यो विस्तारै मथ्थर हुँदै जान्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।
कसरी मथ्थर हुन्छ ? नेपाली कांग्रेसको बहुमत भएको नगर सभाले तर्जुमा गरेको बजेटको विरुद्धमा कांग्रेस नगर समितिले नै विरोधसहित नाराजुलुस गर्यो त ?
पार्टीले चुनावअघि हामीलाई विश्वास गरेर टिकट दियो । जनताले पनि विश्वासका साथ हामीलाई जिताउनु भयो । अब पार्टीले पनि के कुरा बुभ्mनुप¥यो भने हरेक कुरामा जनप्रतिनिधिलाई हातखुट्टा बाँधेर यो गर, त्यो गर भनेर दबाव दिइरहनु भएन् । हामीले जनतासँग गरेका वाचाहरु पूरा गर्नैपर्ने हुन्छ । अनेक समस्या र वाधाहरू आउँछन्, त्यस्तो अवस्थामा छिटो निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण, पार्टीले जनप्रतिनिधिको हातखुट्टा बाँधेर यो गर, त्यो गर भन्नुहुँदैन तर हामीले पार्टीलाई हानी पुग्ने कामको गरेको भए आजैको दिनबाट म यो पद त्याग्नलाई मन्जुर भएर बसेको मान्छे हुँ । त्यहि भएर, यी चाहिँ पार्टीको आन्तरिक कुराहरु हुन् । यसो गरेन, त्यसो गरेन भनेर हाम्रा केही साथीहरूले पार्टीको वर्खिलाप गयो भनेर मुद्दा बनाईएको मात्रै हो ।
तर, नगर सभाको बजेट सत्र नै कतिपय कांग्रेसी वडाध्यक्षले बहिस्कार गरेका थिए । त्यसो किन गरेको ?
नगरसभामा उहाँहरू आउनुभएको हो । उपस्थिति जनाएर निस्किनु भयो । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने र त्यसको ड्राफ्ट गर्ने पनि हाम्रो एक नम्बर वडाका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, सुरज खड्का । उहाँले नीति तथा कार्यक्रम बनाएपश्चात् त्यो दुई तिहाईले पारित भएको हो । त्यसकै परिधीभित्र रहेर हामीले बजेट निर्माण ग¥यौँ । अहिले उहाँ आफैँले विरोध गरिराख्नुभएको छ । मैले बुभ्mन नसकेको यही हो कि उहाँ किन विरोधमा लाग्नु भयो ? यो कुरा उहाँलाई नै राम्ररी थाहा होला ।
यसरी अन्तरपार्टी संघर्ष भएपछि त काम गर्न गाह्रो होला नि ?
मैले अघि पनि भने, यो क्षणिक द्वन्द्व मात्र हो । उहाँहरूको मैले यो गर्न पाउँ भन्ने आ–आफ्नो सोच होला । त्यो गर्न नपाएर पनि विरोध गरिराख्नुभएको होला । एउटै पार्टीको भएकाले यो बिस्तारै आफैँ मथ्थर हुने विषय हो ।
वडाको विकास निर्माणका लागि भावी योजना के के अघि सार्नु भएको छ ?
वडाको विकासका निम्ति हामीले प्राथमिकताको आधारमा वर्गीकरण नै गरेका छौं । खानेपानी र ढल पहिलो नम्बरमा राखेका छौं । खानेपानी र ढल व्यवस्थित भईसकेपश्चात्, अरु विकासका पूर्वाधार तयार हुँदै जाने हो । ढल र खानेपानी व्यवस्थित नभई त्यहाँ सडक ग्राभेल र पिच गर्नुको औचित्य रहँदैन । त्यसकारणले ढल र खानेपानीलाई व्यवस्थित गराउने र हामीले यो पनि योजना लिएका छौँ कि आगामी दुई वर्षभित्रमा यो दुई नम्बर वडा क्षेत्रलाई ढलमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने । त्यसपछि, अन्य कुरा समेट्दै जाने छौँ । जस्तै हामीले यसपाली मनोहरा पुलबाट छिर्ने त्यहाँ नाटेश्वरी सामुदायिक वन छ । त्यहाँ केही क्षेत्र वन कार्यालयले ओगटेको छ । केही चाहिँ सार्वजनिक जग्गा छ । त्यहाँ सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको जनगुनासो आएको छ । यसपाली हामीले नगरस्तरबाट पचास लाख रुपैँया छुट्याएर त्यसलाई संरक्षण गर्ने र पार्क निर्माण गर्ने योजना बनाएका छौँ । यो कार्य चालू आर्थिक वर्षमा पुरा हुन्छ ।
वडाका सबै सार्वजनिक, ऐलानी जग्गाहरु खोज्ने कि त्यो एउटा मात्रै संरक्षण गर्ने ?
यो त सम्पूर्ण वडालाई नै जिम्मा दिईन्छ । यस्ता जग्गाहरुको संरक्षणका लागि हामीले एकमुष्ट बजेट पनि राखेका छौँ । त्यसमा विशेष हाम्रो वडामा रहेको त्यस्ता सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गरेर संरक्षण गर्ने कार्ययोजना रहेको छ । वडाभित्रको शैक्षिक कार्यक्रम चाहिँ कसरी चलेको छ ? चाँडै नै अब कार्यपालिकाको बैठक बस्दैछ । त्यसमा हामीले एउटा शिक्षा समिति गठन गर्नेछौ । समिति गठनपछि त्यसले शिक्षा ऐन बनाउँछ । त्यही बमोजिम नगरका विद्यालयहरू सञ्चालन हुनेछन् ।
वडाले युवाहरूका लागि चाहिँ के गर्दैछ ?
युवाहरुका लागि खेलकुदका कार्यक्रम छन् । कभर्ड हल बनाउने, रंगशाला बनाउने योजना छ । वडाका युवाले ल्याएको जति पनि राम्रा प्रस्तावहरू हुन्छन् त्यसमा वडाले सहकार्य गर्नेछ । युवा स्वरोजगार, सीपमुलक तालिम, कुलतविरुद्ध युवावर्गमा जनचेतना जगाउने जस्ता कार्यक्रम पनि वडाको प्राथमिकतामा छन् ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि वडामा कति बजेट आएको छ ?
१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । त्यसमा विभिन्न लक्षित वर्ग,सीपमुलक तालिमका लागि रू. १० लाख र वडा कार्यालय व्यवस्थापनका लागि छुट्टै बजेट हुन्छ । हामी इमान्दारीपूर्वक काम गरिरहेका छौं । त्यसकारण सम्पूर्ण नगरवासीले धेरै कुराहरु सकारात्मक भएर सोचीदिनुहुन मेरो विनम्र अनुरोध छ । हामी गर्दैछौँ । गर्ने प्रयासमा छौँ र धेरै गर्ने भनेरै आएका छौँ । जुन जोश र जाँगर लिएर आएका छौँ, नकारात्मक कुरा सुन्दा कहिले काहिँ निराश भइन्छ । हामीलाई निराश नबनाउनुस् । हामीलाई तपाईँको उर्जाको धेरै खाँचो छ । तपाईँहरू उर्जा दिनुस् । हामीहरु काम गर्न जहिले पनि तत्पर छौँ ।
प्रकाशित २ भाद्र २0७५ , शनिबार | 2018-08-18 05:44:58
डा. बाबुराम ‘विश्वविद्यालयका छात्र’ विश्वदीप 508.7K
सीमा क्षेत्रका अब्बल प्रहरी निरीक्षक चूडामणि 218.7K
‘पाँचखाल नगर कृषि सहर’ बनाउन दत्तचित्त छुःमेयर खरेल 212.4K
निजी विद्यालय खारेज गर्ने हिम्मत कसैसँग छैन्: विष्णु पराजुली, अध्यक्ष एनप्याब्सन, काठमाडौँ जिल्ला 181.5K
गर्भ तुहाएर छात्रा हत्या गरेको अभियोगमा प्रधानाध्यापक पक्राउ 154.8K
सरलीकृत सेवा प्रवाह नै बैंकको मुख्य रणनीति होः प्रवीण बस्नेत, डेपुटी सिईओ, कामना सेवा विकास बैँक लिमिटेड 154.3K